नाम मात्रैको राम्री, सडक भने नराम्री
राम्री नाम भएर होला प्रायले राम्रीको बोर्डसँग फोटा खिचेर फेसबुकमा पोष्ट गर्ने गर्दछन् ।
कुरा हो राप्ती राजमार्गको दाङ–सल्यान सडक खण्डको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ३ मा पर्ने राम्री ! यहाँको नाम राम्री मात्रै हो, तर यहाँकाे सडक भने नराम्रो छ । यहाँ बर्षेनी धेरै सडक दुर्घटना हुने गर्दछन् । सडक दुर्घटनामा यहाँ कयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने कयौँ घाइते भएका छन् ।
सल्यानको कपुरकोट बजारको प्रहरी चेक पोष्ट देखि दाङ तुलसीपुरको लाहुरेचौर सम्मकै राप्ती राजमार्गको सडक धेरै अफ्ठ्यारो र खतरापुर्ण मानिन्छ । सल्यानको कपुरकोटबाट दाङको तुलसीपुर झर्दा सडक ओरालो पर्ने र थुप्रै साघुँरा घुम्ती भएका कारणले यहाँ बर्षैपिच्छे दुर्घटना हुने गर्दछन् । साना घुम्ती भएकाले अगाडिको दृश्य प्रष्ट नदेखिने हुँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको बुझाई छ ।
यो बर्षको हिजो शुक्रबार मात्रै यहाँ भयानक दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा २३ जनाले ज्यान गुमाए भने १४ जना घाइते भए ।
सल्यानको मुलपानी वनस्पति उद्यानको अवलोकन भ्रमण गरेर दाङ फर्कदै गरेको बा ४ ख ९७६६ नंम्वरको बस शुक्रबार साँझ पौने ५ बजेतिर सडकबाट झन्डै ७ सय मिटरसम्म तल खस्दा दुर्घटना भएको थियो । बसमा घोराहीमा रहेको कृष्णसेन ईच्छुक पोलि टेक्निकल इन्टीच्युटका ३२ जना बिद्यार्थी, ३ जना गाडिका कर्मचारी र २ जना शिक्षक रहेका थिए ।
त्यस्तै अघिल्लो बर्ष यहाँ ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सल्यानको कपुरकोटबाट तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको लु २ त २५५८ नम्बरको ट्र्याक्टर रातिको समयमा पल्टीदा दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
अनौठो यो छ की, यहाँ दुर्घटना भएपछि मानिस खोज्न सम्म कठिनाई हुन्छ । ,र चिन्न सम्म सकिदैन् । दुर्घटनामा परि ट्याक्टर चालको मृत्यु भएको भनिएको थियो, परिवारलाई शव समेत बुझइएको थियो । तर चालक दुई दिन पछि जिवतैै सम्पर्कमा आएका थिए ।
पछि बुझ्दा दुर्घटनामा अर्कै सवार र सहचालकको मृत्यु भएको रहेछ । चालक भने घाइते अस्थामा लडेको र होस् आएपछि आफै अस्पताल पुगेका थिए ।
त्यसैगरी दुईबर्ष अघि पनि राम्रीमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसको अघिलो बर्ष पनि सल्यानवाट दाङ जाँंदै गरेको जीप दुर्घटना हुंदा २ जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो । उक्त जीप राती १ बजेको समयमा दुर्घटना भई सडकबाट २ सय मिटर तल खसेर खसेको थियो ।
गएको असार १८ गते राती पनि यही ठाउँमा तरकारी बोकेको पिकप दुर्घटना हुँदा सल्यान बागचौर नगरपालिका ९ कोटमौला डाँगीगाउँ कमलपोखरीका ३५ वर्षीय गोरख डाँगीको पनि मृत्यु भएको थियो ।
यी त शब्दमा उतार्न सकेका घटना मात्रै हुन् । यहाँ बर्षेनी थुप्रै दुर्घटना भएका छन् । बर्षातको समयमा यहाँ यात्रा गर्न धेरै कठिनाई हुने गर्दछ । पहिरोले सडक अबरुद्ध हुँदा कयौँ घण्टा गाडी जाम हुने गर्दछन् ।
केहि बर्ष पहिले मात्रै गरेको सडक कालोपत्रे अहिले कच्चीमा परिनत भएको छ । बर्षेनी थुप्रै बजेट आएपनि यो सडकको स्थर उन्नती हुन सकेको छैन् । यो सडकमा दैनिक सयौँ सवारी साधन गुड्ने गर्दछन् । दाङबाट सल्यान, रुकुम, रोल्पा आवातजावत गर्ने सडकमा पर्छ राम्री !
धेरै अफ्ठ्यारो र चुनौतीपुर्ण मानिने यो सडकको विकल्पमा अरु पनि देखिदैन् । केहिदिन अघि सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले यसको विकल्पमा सल्यानको लुहाम देखि दाङको तुलसीपुर सम्म सिधै सुरुङमार्ग हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसको लागी आफुहरुले पहल गरिरहेको उनको तर्क थियो । अहिले यो सडकको स्थर उन्नतीको लागी संघिय सरकारबाट यस बर्ष ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।